Nagu saabsan - Dongguan Shengrui Metal Crafts Co., Ltd.
Dongguan Shengrui Birta Farshaxanka Co., Ltd.
Waa kuma Shengrui
Dongguan Shengrui Metal Crafts Co., Ltd .waa soo saare xirfadle ah iyo dhoofis oo ku takhasusay naqshadaynta iyo soo saaridda farsamada birta. Waxaan ku jirnay naqshadeynta iyo soo saarista handarada bilada isboortiga, jillaabyada qurxinta biraha, rakooyinka, dabaylaha dabaysha, farshaxanka gidaarka birta, buugaagta biraha lagu qurxiyo, kuwa shumaca haysta, sagxadaha khamriga, kuwa haysta dahabka birta ah iyo waxyaabo kale oo badan oo biraha loo habeeyay in ka badan 14 sanado.
Ku saabsan Shengrui
Waxaan leenahay kooxdayada naqshadeynta iyo iibinta. Waxaan ku siin karnaa fikrado naqshadeyn oo aad u fiican iyo jawaab togan oo ku saabsan dhibaatooyinka iibka ka hor iyo ka dib iibinta. f haddii aad xiisaynayso mid ka mid ah alaabtayada ama aad jeclaan lahayd inaad ka hadasho badeecad la habeeyay, fadlan xor u noqo inaad nala soo xiriirto. Waxaan rajeyneynaa inaan la dhisno xiriir ganacsi oo guuleysta asxaabta adduunka oo idil.
Dhammaan alaabtayada waxay u hoggaansamaan heerarka tayada caalamiga ah. Xarumaheena si fiican u qalabaysan, shaqaale aad u tababaran iyo xakamaynta tayada oo aad u fiican dhammaan heerarka wax soo saarka ayaa noo saamaxaya inaan dammaanad qaadno qanacsanaanta macaamilka.
Xirfaddeennu waa goynta laser, taas oo si weyn u yareyn karta waqtiga wax -qabadka, kharashyada, iyo hagaajinta tayada wax -soo -saar kasta.Waxaan aqbalnaa amarka LOW MOQ annaga oo aan sameynin mould.Waxaan leenahay 12+ sano oo waayo -aragnimo ah kooxda naqshadeynta taasoo naga dhigaysa inaan awoodno qaado mashaariic kasta oo la diyaariyey iyadoo loo eegayo fikradda macaamiisha, sawirka ama shaybaarka iwm Sidoo kale waxaan bixinnaa adeegyada ODM.
Sannadkii 2006, Dongguan Shengrui Metal Crafts Co., Ltd. ayaa la aasaasay.
2007, Waxaan dhisnay kooxdayada iibka.
Sannadkii 2010, waxaan helnay Shahaadada ISO9001.
Sannadkii 2012, Waxaan soo iibsannay 3 mashiinno goynta laser 3000w oo cusub ah waxaanan aasaasnay ​​waaxda naqshadeynta.
Sannadkii 2014, waxaan soo iibsannay mashiinnada foorarsiga, mashiinnada alxanka, qalabka wax lagu nadiifiyo oo noo saamaxaya inaan xakameynno kharashyadeena iyo tayodeenna si ka wanaagsan.
Sannadkii 2016, waxaan ku maalgelinay $ 200000.00 khadadka wax -soo -saarka taas oo naga dhigaysa inaan xakameyno dhammaan geeddi -socodka wax -soo -saarka, wuxuu ka dhigaa kharashyadeenna mid aad u tartamaya oo xakamaynta tayada ayaa sii adkaanaysa.
Sanadkii 2017, Waxaan bilawnay inaan la shaqayno shirkado waawayn sida Disney Tani waxay naga dhigaysaa mid aad iyo aad ugu kalsoon aaggan.
Coat Hanger Rack Hooks, Qabatooyinka Furaha Furaha, Qaansarka Warshada Darbiga, Farshaxanka Darbiga Birta, Hanjabaadda Dheriga Dhirta, Qabanqaabiyaha Hook Furaha,